Rasmi: filimka Raazi iyo Talaadadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay – Filimside.net
Rasmi: filimka Raazi iyo Talaadadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay
May 16, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: May 16, 2018
Alia Bhatt filimkeeda ayaa ganacsi wacan sameenayo maal maha shaqada wuxuuna keenay 5.75 Crore Talaadadiisa kowaad taasi oo ka dhigan mudo shan maalmood ah inuu soo xareeyay 44.50 Crore (Trade Figure).
Raazi mudo shan maalmood ah wuxuu ganacsi ahaan ku dhawaaday inuu bar bareeyo filimka Blockbuster-ka noqday Sonu Ke Tito Ki Sweety todobaadkiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay.
Sida muuqato Raazi todobaadkiisa kowaad wuxuu keeni doonaa 54 Crore ilaa 55 Crore ganacsi u dhaxeeyo kadibna Jimcadiisa labaad ganacsiga uu sameeyo ayaa laga ogaan karaa halka uu hiigsanayo mashruucaan hirgalay.
Raazi haddii uu ganacsigiisa wacan sii wato waa hubaal inuu 100 Crore gaari karo madaama afarta todobaad nagu soo fool leh filim Hindi ah oo halis weyn galin karo tiyaatarada la saari doonin ilaa Race 3 laga gaarayo.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Raazi iyo mudo shan maalmood ah ganacsiga uu sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Sabti – 11.25 Crore
Axad – 14 Crore
Isniin – 6 Crore
Talaado 5.75 Crore
Waa hubaal Raazi inuu noqon doono filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo ee atirisho hogaamiye ka tahay marka laga reebo Tanu Weds Manu Returns (149 Crore) oo ahaa filim qaybtiisa kowaad Hit noqotay.